भाइटीकाको विवाद बास्तबिकता यस्तो… प्रतिपदाकै दिन टिका? – Sudarshan Khabar
वास्तवमा भाइटीका कात्तिक शुक्ल द्वितीयाको दिन पर्ने गर्छ । तर यो साल प्रतिपदाकै दिन अर्थात् मंसिर १ गते नै भाइटीकाको तिथि तोकिएको छ । यो पनि विवादको विषय हो । तर यसमा पनि एउटा छुट्टै तर्कले काम गरेको छ । शास्त्रले भाइटीका मध्याह्नमा द्वितीया तिथि परेको दिन मात्रै लगाउन सकिने भन्ने उल्लेख गरेको छ ।
कात्तिक ३० गते बिहान ११ बजेर २७ मिनेट जाँदा सुरु भएको प्रतिपदा तिथि मंसिर १ गते बिहान ९ बजेर १२ मिनेटमा सम्पन्न हुन्छ र द्वितीया लाग्छ । शास्त्रीय मान्यता अनुसार मंसिर १ गते बिहान सवा ९ बजेदेखि द्वितीया तिथि लाग्ने र शास्त्रोक्त विषय अनुसार मध्याह्नमा द्वितीया तिथि १ गते नै पर्ने भएकोले भाइटीका मंसिर एक गतेको लागि तय गरिएको सचिव ढुंगेलले जानकारी दिए । त्यसैले यो सालको भाइटीका मंसिर एक गते नै तय भएको उनले स्पष्ट पारे ।
तिहारको तिथि विवाद यो वर्षमात्रै नभएर अघिल्ला केहीवर्षदेखि चल्दै आएको कुरा हो । तिथिको घडीपलाको आधारमा पर्व मान्ने पक्ष र परम्परा अनुसार सूर्याेदयको समयमा जुन तिथि सुरु भएको छ त्यही तिथिलाई आधार मानेर पर्व मान्ने समूहबीच अघिल्लो वर्षदेखि नै विवाद जारी थियो । त्यसैले तिथि मान्ने र परम्परा मान्नेको बीचमा विवाद अघिल्ला वर्षमा पनि विवाद चल्ने गरेको थियो ।
असन सेवा समिति लगायतले निकाल्ने भित्तेपात्रोमा किजा पूजा र अरू पूजाको मितिबारेमा फरक मत आएपछि यो विवाद सतहमा आएको थियो । जोशी समाजले त यस विषयमा विज्ञप्ति नै निकालेर फरक मत राखेको छ ।
यसरी, यो वर्ष घडीपलालाई आधार मानेर पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले मंसिर १ गतेको लागि भाइटीकाको तिथि सार्वजनिक गर्‍यो । त्यसपछि स्थानीय परम्परा अनुसार जुन तिथि सूर्याेदयको समयमा थियो त्यसैलाई दिनभरिको तिथि मान्ने समूहले विरोध गरे । उनीहरूले मंसिर २ गते नै किजा पूजा गर्ने घोषणा गरे ।
विवाद बाहिर आएपछि अहिले सरकारले मंसिर २ गते पनि सार्वजनिक विदा दिएको छ । तर, पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले भने मंसिर १ मा नै भाइटीका लगाउन भनेको छ ।
online khabar मा खवर छ
हेटौडा देखि हार्वडसम्मको पुर्व मिस नेपाल शृङ्खला…
खुल्यो सिइडिबी हाइड्रोपावरको आइपिओ, कस्तो छ कम्पनी?
सांसद शाहिको स्वाब संकलनको एक मिनेट मै…